अष्ट्रेलियाबाट जाने चार्टड उडानको समय परिवर्तन, अब बिहीबार साँझ ५ः१५ मा उड्ने « MNTVONLINE.COM
अष्ट्रेलियाबाट जाने चार्टड उडानको समय परिवर्तन, अब बिहीबार साँझ ५ः१५ मा उड्ने
अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली नागरिकलाई लिएर बिहीबार सिड्नीबाट काठमाडौ जाने विमानको उडान समय तालिका परिवर्तन भएको छ । एनआरएन अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष केशव कँडेलका अनुसार नयाँ तालिकामा बिहीबार साँझ ५ः१५ मा विमान सिड्नीबाट उड्नेछ । मलेसियाको मालिन्डो एयरमार्फत यस पटक नेपाली यात्रुहरु सिड्नीबाट काठमाडौं जान लागेका हुन् ।
कँडेलले विहन सबेरै उडान भएका कारण ३ बजे नै विमानस्थल पुग्नुपर्ने बाध्यताबाट राहत मिलेको बताए । उनले साँझ उडेको विमान भोलिपल्ट विहान काठमाडौं पुग्ने जानकारी दिए । विहान ६ बजे मात्रै काठमाडौंमा विमानस्थल खुल्ने भएकोले त्यसै अनुसार मलेसियाबाट विमान उड्नेछ । नेपाली समय अनुसार विमान विहान ६:१५ मा बजे काठमाडौंमा ल्याण्ड गर्नेछ ।
विमान ईन्डोनेसिया, मलेसिया हुँदै काठमाडौं पुग्नेछ । मालिन्डो एयरले अष्ट्रेलियासँग यही रुटमा उडानको ईजाजत लिएका कारण ४० मिनेटका लागि भएपनि ईन्डोनेसियामा रोक्नुपर्ने भएको हो । तर, यात्रुले सिड्नीमा चढेपछि एकैपटक काठमाडौंमा उत्रन पाउनेछन् ।
अष्ट्रेलियाबाट ३० जुलाईमा १ सय ६० जना स्वदेश फर्कने !
मालिन्डोको चार्टड फ्लाईट विहान ६ बजे उड्ने, सोही दिन साँझ ५ः३० मा काठमाडौं पुग्ने !
बोक्सीको आरोपमा ४ लाख दिएर दम्पतीको विभत्स हत्या, ४ पक्राउ !
साउन १६ को राती साढे २ बजे शौच गर्नका लागि घर बाहिर निस्किएका ७० वर्षीय